Polyester Yakarukwa Rwodzi, Polyester Yakavhara Shinda, Serger Thread
Material: 100% polyester inoenderera filament DTY
Apex 1000yds kusvika 20000yds / cone, kana 0.5kg kusvika 2.0kg / koni
Yakanakisa seam coverage
Yakanaka elastic pfuma
Zvigadzirwa zvakagadzirirwa uye pasuru zviripo
Kusona tambo kubuda kunosvika 3000tons/mwedzi (150*40'HQ)
Usage: Inowanzoshandiswa pakuvhara kwemicheka yakarukwa, senge yepasi, nguo dzakarukwa, zvipfeko zvemitambo uye zvevana zvevakadzi.
Chii chiri overlocking Kusona tsvimbo?
General Chinangwa Kuvharidzira Thread ndizvo chaizvo zvazvinotaura patin. Ishinda yakanaka, yakatsetseka, ine simba rakati tsvikiti rakagadzirwa kuti rimhanye zvakanyanya nekumhanya kwakanyanya uye rinogona kushandiswa pane ese ari maviri akavharisa tsono kana looper.
Ishinda yekuvharisa yakasiyana neshinda yekusonesa here?
Shinda yakavharika yakanatsa pane shinda yemuchina wekusonesa wenguva dzose, kuitira kudzivirira misono yakawanda. Inofanirwa kuve yakatsetseka uye inowirirana mudhayamita sezvo ichipfuura nemadhairekitori akawanda mu serger. Kuvhara shinda hakufanirwe kusiya yakawanda, kuitira kuti irege kuvhara serger.
Kuvharidzira / Yakagadzirwa Thread Yakakodzera Zvishandiso
Denier Tex Size yetikiti Usage
150D / 1 18 160 Tsika yakajairika inodarika
200D / 1 21 110 Mukati kukwirira tende rinodarika
150D / 2 35 80 Yakakura mashizha akavhara
300D / 1 35 80 Yakakura mashizha akavhara